Brazil:Geerida Joao Havelange,Guddoomiyihii taariikhiga ahaa ee FIFA – Kasmo Newspaper
Brazil:Geerida Joao Havelange,Guddoomiyihii taariikhiga ahaa ee FIFA
Updated - August 16, 2016 1:47 pm GMT
Saaka aroortii,wakhtiga Brazil,ayuu geeriyooday,Joao Havelange,Guddoomiyihii hore ee Xiriirka Kubadda cagta adduunka FIFA.
Jean-Marie Faustin Goedefroid de Havelange waxaa uu ahaa Garyaqaan,Ganacsade,Cayaartoy hore iyo Guddoomiyihii 7aad ee Xiriirka Kubbadda Cagta adduunka,ninkii u horreeyay oo an Yurub ahayn oo xilaas qabta. Aabihiis waxaa uu ahaa ganacsade ka soo jeeda dalka Beljium oo Brazil ku bulaalay.
Waxaa da’da 100 sano ay ugu buuxsantay 8dii May ee la soo dhaafay,waxaana ilaa July uu ku jiray Isbitaalka Samaritano ee Botafogo,xaafad koofurta Rio ku taalla,xanuun neef-mareenka ah dartiis.
Geeridiisa waxaa baahiyay SportTv,intii uu socday barnaamij loogu talagalay Cayaaraha Olimbikada ee hadda ka soconaya Rio de Janeiro.
Havelange waxaa uu sannado badan ahaa milkiilaha runta ah ee Kubbadda Cagta Adduunka,isaga oo Guddoomiye u ahaa Fifa laga soo bilaabo sannadkii 1974kii ilaa 1998kii,wakhtigaas oo uu xiriirka Fifa u rogay Xarun ganacsi.
Intii uu xilka hayay waxaa lagu xasuusan karaa isaga oo isbeddel ku sameeyay habkii cayaaraha Koobka adduunka,isaga oo tirada kooxaha oo ahaa 16 ka dhigay 24,sannadkii 1982kii,markii dambana 32 kooxood,kulankii Fransa ee sannadkii 1998kii.
Waxaa kale oo xubin uu ka ahaa Guddiga Caalamiga ah ee Olimbikada adduunka IOC,laakiin waxaa xilkaas iyo kii Guddoomiye-sharafeedka Fifa uu waayay 18kii April 2013kii,markii ay soo bexeen fadeexooyinkii musuqmaasuqa ee hareeyay Xiriirkaas.Laakiin da’diisa darteed,waxaa laga baajiyay baaritaannadii la xiriiray kiisaskaas.
Intii uu guddoonka u hayay Xiriirka Kubbadda Cagta Brazil waxaa uu ku guulaystay cayaarihii koobka Adduunka ee sannadadii 1958,1962 iyo 1970kii. Waxaana dhallinyara nimadiisii uu ahaa cayaartoy ku fiican dabaasha iyo kubbadaha biyaha.